इलिसाबेट बेनाभेन्टको पुस्तकहरू, रोमान्टिक उपन्यासहरूमा सबैभन्दा धेरै पढिएको हो वर्तमान साहित्य
एल्साबेट बेनाभेन्टका पुस्तकहरू
जुआन अर्टिज | | लेखकहरू, किताबहरु, रोमान्स उपन्यास
"एलिसाबेट बेनाभेंट लिब्रोस" स्पेनिश वेबमा दोहोरिने खोजी हो, र जसले गाथासँग सम्बन्धित डाटा फिर्ता गर्छ। वेलेरिया। यस संग्रहमा लेखकले पहिलो चार पुस्तकहरू समावेश गर्दछ, जुनसँग उनले विश्वभरि 3.000.000,००,००० भन्दा बढी पाठकहरूलाई मोहित गरिसकेका छन। प्राप्त सफलताको कारण, नेटफ्लिक्स प्लेटफर्मले २०२० मा श्रृंखलाको पहिलो सत्रको प्रीमियर गर्‍यो भलेरिया।
एलासाबेट बेनाभेन्ट सामाजिक नेटवर्कको दुनियामा "बेटाकोक्वेटा" को नामले परिचित छ, एक नाम जुन उनले आफ्नो ब्लगको लागि धन्यवाद अपनाईन्। युवती साहित्यिक महिलाले उनको विधालाई "रोमान्टिक-समकालीन" भन्छन्। त्यो लेबल अन्तर्गत कुल २० कार्यहरू सिर्जना गरेको छ, जसमा - गाथाका साथै वेलेरिया- अलग देखिनु: एक त्रयी, चार bilogies र5व्यक्तिगत मुद्दाहरू
1 एल्साबेट बेनाभेन्टको जीवनको संक्षिप्त समीक्षा
2 एल्साबेट बेनाभेन्टका सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू
2.1 भेलेरियाको जुत्तामा (२०१))
2.2 कोही म होइन (२०१ 2014)
2.3 सोफिया हुनुको जादू (२०१))
2.4 हामी गीतहरू (२०१ 2018) थियौं
2.5 एक उत्तम कथा (२०२०)
3 एल्साबेट बेनाभेन्टका पुस्तकहरू
एल्साबेट बेनाभेन्टको जीवनको संक्षिप्त समीक्षा
एल्साबेट बेनाभेंट सन् १ V nc 1984 मा स्पेनको भ्यालेन्सियन नगरपालिका गान्डाकामा जन्म भएको थियो। उनले आफ्नो व्यावसायिक अध्ययन भ्यालेन्सियाको सीईयू कर्डेनल हेर्रे विश्वविद्यालयमा पूरा गरे; त्यहाँ अडियोभिजुअल संचार मा स्नातक को रूप मा स्नातक। बर्ष पछि, Gandiense उनले म्याड्रिडको कम्पुलेटन्स युनिभर्सिटीमा कम्युनिकेशन र आर्टमा स्नातकोत्तर गरे, त्यो शहर जहाँ उहाँ त्यसबेलादेखि बस्नुभयो।
2013 मा, उनको साथीहरु बाट प्रभावित, स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो पहिलो पुस्तक प्रकाशित: भलेरियाका जुत्तामा, अमेजन प्लेटफर्मको माध्यमबाट। वेबमा गम्भिर सफलताको कारण, लेखकलाई सम्पादकीय सुमा द्वारा सम्पर्क गरिएको थियो यो पहिलो किस्तको आधिकारिक प्रकाशनको लागि र अन्य पुस्तकहरू जुन कि गाथा बनाउँदछ। वेलेरिया.
एल्साबेट बेनाभेन्टका सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू
भलेरियाका जुत्ताहरूमा (2013)
यो एल्साबेट बेनाभेन्ट by र द्वारा लेखिएको पहिलो पुस्तक हो गाथा भ्यालेरिया। यो एक रोमान्टिक उपन्यास हो जुन म्याड्रिड शहर मा लिन्छ। यो कामले दस लाख भन्दा बढी प्रतिहरू बिक्रि गर्‍यो र द्रुत रूपमा उपन्यासकारलाई "सर्वश्रेष्ठ विक्रेता" बनायो।। २०२० मा, नेटफ्लिक्स प्लेटफर्मले सागामा ढाँचाएको श्रृंखलाको प्रीमियर गर्‍यो, जहाँ Benavent एक उत्पादन पर्यवेक्षक को रूप मा काम गर्दछ।
कथा in अविभाज्य साथीहरू: भ्यालेरिया, नेरिया, कार्मेन र लोलाको जीवनमा केन्द्रित छ। मुख्य षड्यन्त्र भालेरियाको वरिपरि घुम्छ, एक लेखकले उनको किशोरी प्रेमसँग विवाह गरी, जसको मिलन एकलताबाट प्रभावित छ। असन्तुष्ट र उनको अर्को पुस्तकको लागि प्रेरणाको खोजीमा, उनले एक पट्टीमा आफ्ना साथीहरूलाई भेट्ने निर्णय गरे। त्यो रात उनी भिक्टरलाई भेटिन्, जसले उनलाई मोहित पार्छिन् र श doubts्काका साथ भर्नुहुन्छ।
कथा यी महिलाहरु को जीवन बताउँछ, जसको व्यक्तित्वहरु फरक छन्, तर जो मित्रता को एक अटुट बन्धन कायम। यो कसरी देखिन्छ प्रेम र हृदय विच्छेद, जुनून, खुशी र दुःख भरिएको एक कहानी जुन राम्रो हास्यको संकेतको साथ छ र धेरै पार्टी रातहरू।
भलेरियाका जुत्तामा ...
कोही म हैन (2014)
यो त्रयीको पहिलो किस्त हो मेरो छनौट; यो एक रोमान्टिक उपन्यास हो जुन कामुकताको स्पर्शको साथ माद्रिदको छेउमा हुन्छ। यसको मुख्य पात्र एक युवा पत्रकार हो जो एक दिनको लागि पुरस्कार प्राप्त गर्न आकांक्षी हुन्छ पुलित्जर, तर, जब उनी हालिन्छन्, उनको योजनाहरु को पतन हुन्छ। कामको अर्को क्षेत्र मा एक नयाँ अवसर उनको जीवन परिवर्तन गर्ने दुई मान्छे भेट्न बनाउनेछ।
अल्बा पत्रकारितामा समर्पित महिला हुन्, तर बेरोजगार र बाँच्न बाध्य भई, उनले सेक्रेटरी पदका लागि समाधान गर्नुपर्दछ। आफ्नो कामको पहिलो दिनको बाटोमा, उनले मोहित लुकको साथ एक सुन्दर सज्जनलाई भेट्छन् एउटा रेल स्टेसनमा। त्यसले उनको प्यासिन्स् छोड्छ। अपेक्षित, ऊ आफ्नो गन्तव्यमा जारी राख्छ; अफिसमा आउँछ र ठूलो लिन्छ आश्चर्यचकित भेटमा su मालिक: यो ह्युगो हो, त्यो रहस्यमय मान्छे जससँग उसले केही क्षण अघि पार गर्यो।
जब तपाईं आफ्नो कामको तालिका जारी राख्नुहुन्छ, अल्बा अर्को युवा मानिस - निकोलसलाई भेट्छिन् जसले पनि उनको ध्यान जबरजस्ती कब्जा गरे। ह्युगो र निकोला सहकर्मी मात्र होइन, असल साथी र रूममेट पनि हुन्। दुबै उनको आकर्षण संग उनको वरिपरि र उनको प्रतिरोध गर्न सक्षम हुनेछैन भन्ने प्रस्ताव संग उल्टो संसारको बारी।
कोही म हैन (मेरो ...
सोफिया हुनुको जादू (2017)
यो समकालीन रोमान्टिक उपन्यास हो जसको षड्यन्त्र मैड्रिडमा सेट गरिएको छ र यसको मुख्य पात्र सोफिया नामकी केटी हो। अरु के छ त, जीवशास्त्रको पहिलो पुस्तक हो भएको जादू; यो भन्दा पहिले: गाथा भलेरिया, त्रयी मेरो छनौट र bilogies सिल्भियाको y मार्टिना।
सोफिया एक साधारण र स्वतन्त्र युवती हुन् जो म्याड्रिडमा बस्नुहुन्छ र El café de Alejandría मा काम गरीरहेको छ। एक प्रेम निराशाको सामना गर्नुपर्दा, उनले यसलाई पछाडि पारेर सफल हुन सफल भईन्। एक दिन अरू जस्तो, एक सुन्दर र असंवेदनशील मानिस क्याफेटरियामा टुक्रियो: हेक्टर; उनी उनीसँग रूखो छ र यो दुबैको कारण उनीहरूसँग एउटा झगडा छ।
दिनहरू गयो हेक्टर सोफियासँग माफी माग्न फर्किन्छन् र त्यो भनेको "जादू: दुई गन्तव्यहरू मिल्छ" को रूपमा वर्णन गरिए पछि। दुईको बीचमा राम्रो रसायनिकता भए पनि, त्यहाँ एक झुकाव छ: हेक्टरसँग औपचारिक प्रेमिका छ, एक महिला जसले आफ्नो सौन्दर्यलाई चकित पार्छन्। यसले सोफा र हेक्टरको बीचमा कहानी जटिल बनाउँछ, जुन प्रेम, नाटक र कष्टले घेरिनेछ।
सोफिया हुनुको जादू ...
हामी गीतहरू थियौं (2018)
यो जीवशास्त्रको पहिलो प्रतिलिपि हो गीत र मेमोरीहरू; यो म्याड्रिड मा सेट एक रोमान्टिक कहानी हो। बेनाभेन्टले तीन सर्वश्रेष्ठ मित्रहरू प्रस्तुत गर्दछ: म्याकारेना, जिमेना र एड्रिआना, सबै आफ्नै योजना; यद्यपि, पूर्वको मुख्य भूमिका हुन्छ।
माकरीना उनी एक उत्कृष्ट महिलाको साथ युवती हुन्, तर उसले केही हदसम्म गाह्रो मालिक र विगतको एक प्रेमसँग सम्झौता गर्नुपर्छ जो आफ्नो जीवनलाई जटिल बनाउन फिर्ता आउँदछ।
२०२० मा, नेटफ्लिक्सले फिल्म अनुकूलन फिल्मांकन शुरू गर्न घोषणा गर्‍यो de गीत र मेमोरीहरू, पुस्तकहरूको रचना: हामी गीतहरू थियौं y हामी सम्झनाहरु हुनेछौं। फिल्म जुआना मकास निर्देशित हुनेछ र मारिया भल्भर्डे र अलेक्स गोन्जालेज अभिनय गर्ने; यसको प्रीमियर २०२१ मा अपेक्षित छ।
माकरीना एक युवती हुन् एक प्रभावकर्ता को लागी काम गर्दछ धेरै मांग फैशन, जो आफ्नो मनोवृत्ति संग तानाशाही, उनको आफ्नो काम संग सहज महसुस छैन। एक दिन मका लियो, उनको पूर्व प्रेमीलाई भेट्छ - जो म्याड्रिडको माध्यमबाट जाँदै छ। यसले वर्तमानमा गाडिएका भावनाहरू ल्याउँछ कि उनले सोच्यो कि उनले कटु अन्तको साथमा छोडिन्। बिभिन्न परिस्थितिहरूले तर्क र हृदयको बिरूद्ध लड्न मद्दत पुर्‍याउँछन्।
अर्कोतर्फ, त्यहाँ म्याकेरेनाका राम्रा साथीहरू छन्: जिमेना र एड्रियाना; दुबै बिल्कुल भिन्न प्रेम अवस्थामा। जिमेना विगतमा गाह्रो क्षणलाई पार गर्न सles्घर्ष गर्छिन् नयाँ प्रेमको लागि ढोका खोल्न। यसको सट्टा, एड्रियाना खुशीसँग विवाह गरी र असल जीवन बिताइरहेकी छिन्, यद्यपि उनी अरू केहि चाहान्छिन्।
हामी गीतहरू थियौं ...
एक उत्तम कथा (2020)
यो एल्साबेट बेनाभेन्टको अन्तिम उपन्यास हो, यसमा उनले आफ्नो समकालीन रोमान्टिक शैली सुरक्षित राख्छिन्। यो कथा ग्रीसमा हुन्छ र यसको मुख्य पात्रहरू, मार्गोट र डेभिडले दुई आवाजमा वर्णन गर्दछन्।। प्रत्येकले आफ्नै वातावरणबाट एक दर्शन दिन्छ, दुई धेरै भिन्न सामाजिक वर्गको अनुभव देखाउँदै।
मार्गोट सुनौलो पालनामा जन्म भएको थियो High उच्च समाजको परिवारमा, ठूलो होटल चेनका मालिकहरू। उनी मुख्य उत्तराधिकारी हुन्, उनीसँग एक उत्तम प्रेमी छ र छ सपनाको काम.
अर्कोतर्फ, डेभिड बिल्कुलै भिन्न वास्तविकतामा बाँचे: गाह्रो आर्थिक स्थिति, बहु रोजगार र एक विवादास्पद सम्बन्ध। तिनीहरूको भाग्यहरू सँगै आउँछन् एक दिन जग्गिंग गर्दा; त्यहाँ दुबैको जीवन सदाको लागि परिवर्तन हुन्छ.
मार्गोट, बावजुदaसंग एक महिला हुन एक सिद्ध जीवन ", दु: खी महसुस. डेभिडलाई भेटेर, अर्को वास्तविकता अनुभव गर्नुहोस् तपाईंको जीवनलाई अन्धकारमा राख्नुहोस्। उहाँ, आफ्नो पक्षका लागि, भर्खर आफ्नो प्रेम सम्बन्ध समाप्त गर्नुभयो र आफ्नो संसारलाई उल्टो बनाउनुभएको छ।
अप्रत्याशित बैठक र साझेदारी अनुभव पछि, धेरै विलासिताको साथ मार्गोटले आफू जत्तिको खराब महसुस गर्न पाउँदा दाऊद छक्क पर्छन्। ती दुबै दुबै अद्भुत मित्रताको कटनी गर्छन् जसले उनीहरूको लागि बाटो खुल्छ र धेरै सम्भावनाहरू खुशी हुन सक्छन।
एक उत्तम कथा ...
भलेरियाका जुत्ताहरूमा (2013)।
ऐनामा भालेरिया (2013)।
कालो र सेतो मा Valeria (2013)।
Valeria नग्न (2013)।
चेल्जिया सिल्भिया (2014)
सिल्भिया फेला पार्दै (2014)
त्रयी मेरो छनौट
कोही म हैन (2014)।
तिमी जस्तो कोही (2015)।
कोही म जस्तो (2015)।
लोलाको डायरी (२०१ 2015)
जीवविज्ञान मार्टिना (2016)
समुद्री दृश्यको साथ मार्टिना (2016)।
सुख्खा भूमिमा मार्टिना (2016)।
मेरो टापु (2016)
जीवविज्ञान भएको जादू… (२०१ 2017)
सोफिया हुनुको जादू (2017)।
हामी भएको जादू (2017)।
यो नोटबुक मेरो लागि हो (2017)
जीवविज्ञान गीत र मेमोरीहरू (2018)
हामी गीतहरू थियौं (2018)।
हामी सम्झनाहरु हुनेछौं (2019)।
मेरो झूट को सबै सत्य (2019)
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » रोमान्स उपन्यास » एल्साबेट बेनाभेन्टका पुस्तकहरू
जिप्सी दुल्हन त्रयी
डेभिड गुडिस।3उनका उपन्यासहरूका फिल्म अनुकूलनहरू